विजनेश Archives - मधेश प्रदेश डटकम
काठमाडौं, असोज ७ गते । रियलमी विश्वकै उत्कृष्ट ६ स्मार्टफोनको सूचीमा परेको छ । रियलमी काउन्टर पोइन्टको अनुसन्धान अनुसार विश्वबजारको वरियता क्रममा उत्कृष्ट ६ स्मार्टफोन बिक्रेता भित्र पर्न सफल भएको छ । यो सूचीभित्र पर्नको लागि रियलमीले क्यू २ २०२१ मा १५० करोड आफ्नो उत्पादन बजारमा उपलब्ध गराएर १३५.१% को वाईओवाई बृद्धि गरेको थियो । यो उपलब्धि रियलमीले मात्र ३...
काठमाडौं, भदौ २९ गते । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीलाई दिएको छ । मन्त्रालयले बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना निलम्बनमा परेको अवस्थामा बोर्डको जिम्मेवारी गिरीलाई दिएको हो । सर्वोत्तम सिमेन्ट खरिद प्रकरणमा मुछिएपछि त्यससम्बन्धी छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले समिति गठन गरेसँगै ढुंगाना निलम्बनमा परेका थिए । ढुंगाना निलम्बनमा परेको दुई सातापछि बोर्डको जिम्मेवारी गिरीले सम्हाल्ने भएका हुन् । मन्त्रालयले जिम्मेवारी दिएपछि गिरीले बोर्डको दैनिक प्रशासनसँगै बोर्ड बैठक...
काठमाडौं, असार १४ गते । काठमाडौं उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञालाई अझै खुकुलो बनाउने तयारी भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा आइतबार काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच भएको छलफलका क्रममा निषेधाज्ञाको मोडालिटीलाई थप खुकुलो बनाउने गरी परिमार्जन गर्ने विषयमा छलफल भएको हो । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले सार्वजनिक यातायातलाई पनि जोरबिजोरमा सञ्चालन गर्ने कि केही दिन पर्खने भन्नेमा छलफल भएको तर टुंगो भने नलागेको बताए । ‘निषेधाज्ञाको...
रौतहट । रौतहट जिल्लाको परोहा नगरपालिकामा सुपर मार्केटको निर्माण कार्य तिब्र रुपमा भैरहेको छ ! स्थानीय वडा नम्बर ४ लौकाहामा धेरै बर्ष देखि लाग्दै आएका लौकाहा बजारलाइ सुन्दर र व्यवस्थित बनाउने उदेश्यले तिन तल्ले सुपर मार्केटको भवन निर्माण कार्य भै रहेको हो ! पंचायती काल देखि नै अव्यवस्थित रुपमा संचालनमा रहेका उक्त बजारलाइ आधुनिकीकरण बनाएर स्थानीय कृषि उपजका सामग्रीलाइ बजारीकरण गर्ने उदेश्यले सुपर मार्केटको भवन निर्माणको अवधराना ल्याईएको परोहा नगरपालिकाका...
वीरगञ्ज, ७ जेठ । नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना भाइरसले आक्रान्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको पर्सामा कोभिड एक्सन टिम (क्याट) ले अक्सिजन उद्योगहरुको अनुगमन थालेको छ । क्याटले शुक्रवार वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर २१ परवानीपुरस्थित मधु अक्सिजन उद्योगको अनुगमन गरेको छ । कोभिड संक्रमितको उपचारका लागि महत्वपूर्ण मानिदै आएको अक्सिजनको हाहाकार हुने अवस्थाको अन्त्यका लागि क्याटले अनगुमन थालेको हो । अनुगमनको क्रममा उद्योगले समानुपातिक प्रणालीअनुसार अक्सिजनको वितरण गर्दै आएको क्याटले निस्कर्ष निकालेको छ । अनुगमन...
बारामा सिमेन्ट बोकेको ट्रकमा आगलागी, लाखौंको क्षति
बारा, वैशाख २१ गते । बारामा सिमेन्ट बोकेको ट्रकमा आगलागी हुँदा लाखौंको क्षति भएको छ । हेटौडाबाट सिम्रौनगढ तर्फ आउँदै गरेको सिमेन्ट बोकेको ना.४ ख. ९५९८ नम्बरको ट्रकमा आगलागी हुँदा क्षति भएको हो । आगलागीबाट करिब २ लाख ५६ हजार मूल्यको सिमेन्ट ४ सय २० बोरा र १५ लाख ४४ हजार रुपैयाँको ट्रकमा क्षति पुगेको छ । बाराको कोल्हवी नगरपालिका–४ स्थित तामागढी कोल्हबी सडकखण्डमा बिहान ९ः१० बजे ट्रकमा आगलागी भएको...
पर्सा, फागुन १६ गते । पर्सा प्रहरीले वीरगन्जको एक सुन पसलबाट २५ किलो १ सय ६० ग्राम अवैध चाँदीको गहना बरामद गरेको छ । वीरगन्ज महानगरपालिका ६ स्थित शुभलाभ गहना पसलमा अवैध रुपमा भण्डारण गरी राखिएको उक्त परिमाणको चाँदीको गहना बरामद गरेको हो । अवैध रुपमा भारतबाट चोरी पैठारी गरी चाँदी तथा चाँदीका गरगहनाहरु ल्याई लुकाई छिपाई गरी राखेको भन्ने सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साबाट खटिएको टोलीले गहना बरामद...
रोजगार तथा आत्मनिर्भर बनाउन वडा अध्यक्ष कलवारले दिए ३५ जना महिलाहरुलाई सिलाइ मेशीन
बिरगन्ज । बिरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर ९ का वडा कार्यालयको सहजीकरणमा ३५ जना महिलाहरुलाई एक महिने सिलाइकटाइ तालिमको आज समापन कार्यक्रममा प्रमाण पत्र साथै सिलाइ मेशिन पौदान सहित सम्पूर्ण सहभागीलाइ वितरण भएको छ । वाडका महिलाहरुलाइ रोजगार तथा आत्मनिर्भर बन्न यस कार्यक्रमबाट शतप्रतिशत उपलब्धि पाउने भएकोले यस्ता किसिमको कार्यक्रमलाइ निरन्तरता दिदै जाने वडा अध्यक्ष मनोज कुमार कलवारले बताउनुभयो । आयोजक संस्था सरिता सिप कला केन्द्रका संयोजक सरिता गुप्ताले सिकेको सिप...
वीरगञ्ज, माघ १८ गते । प्रदेश २ को मुख्य नाकाको रुपमा रहेको वीरगञ्ज भन्सार नाकाबाट चालु आर्थिक वर्षको पुससम्ममा ४८ अर्ब मूल्य बराबरको इन्धन नेपाल भित्रिएको छ । सो अवधिमा सबैभन्दा बढी डिजेल भित्रिएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । नेपालमा खपत हुने कूल परिमाणको पेट्रोलियम पदार्थको आधा हिस्सा वीरगञ्ज नाका हुँदै नेपाल भित्रिने गरेको छ । तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ४७ अर्ब ८७ करोड १७ लाख मूल्य...
नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मुल्य
काठमाडौं,माघ १३- आज पनि नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मुल्य बढेको छ । सोमबार ९२ हजार ४०० सय रुपैँयामा कारोबार भएको छापवाल सुनको मुल्य आज ४०० रूपैयाँले बढेको छ । आज छापवाल सुन प्रतितोला ९२ हजार ८०० रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज तेजावी सुनको मुल्य ९२ हजार ३०० रुपैँया कायम भएको छ । यसैगरी चाँदीको मुल्य आज तोलामा १२ सय ५५ रूपैयाँ कायम भएको छ ।
प्रदेश २ सरकारले किनेको बसमा पनि रेलमा जस्तै झेल, महिनौं देखि ढल्केवरको ग्यारेजमै थन्कियो
जनकपुरधाम, माघ ११ गते । बहुप्रतिक्षित जनकपुर(जयनगर ब्रोडगेज रेल सञ्चालनको लागि सम्पूर्ण संरचना महिनौंदेखि तयारी अवस्थामा छ। पहिलो चरणमा गएको असोज २ गते जनकपुरको कुर्थादेखि जयनगरसम्म ३५ किलोमिटर लिकमा चलाउन भारतबाट किनेर दुईसेट रेल जनकपुर आयो। भारतको सरकारी कम्पनी कोकन रेल्वे कर्पोरेशनसँग भ्याट बाहेक ८३ करोड ९३ लाख ६० हजारमा खरिद गरेको दुईसेट रेल जनशक्ति अभावमा धनुषाको इनरुवामा पार्किङमै त्रिपाल ओढाएर थन्क्याइएको छ। जनकपुर रेल आएकै दिन नेपाल रेल्वे कम्पनीका...